Al-Shabaab oo toogtay nin ka tirsan Daacish
Ururka dilaaga ah ee al-Shabaab wuxuu nin uu uga shakiyay inuu ka mid ahaa kooxda aragaggixisada ah ee Daacish ku toogtay magaalada Buu’aale ee gobalka Jubbada Dhexe.
Yaxye Xaaji Fiile, oo loo yaqaannay Abuu Zakariye, wuxuu horaan ka tirsanaa ururka nabad-diidka ah ee al-Shabaab iyadoo uu ka goostay ururka, wuxuuna dib ugu laabtay ururkaas wadahadal ka dib.
Kooxda dhiig-cabtada ee al-Shabaab iyo Daacish, oo labaduba ah labo kooxood oo arxan daran oo diinta Islaameed ku been abuurtay, waxay ku dagaallamayaan xoolaha iyo maalka ay ka bililiqeystaan shacabka Soomaaliyeed ee masaakiinta ah ee ay ugu yeeraan canshuurta.
Labo toddoobaad hadda ka horna cadaawadda u dhaxeysa labadaa kooxood ayaa sare u kacday ka dib markii ururka al-Shabaab uu weerar ku qaaday xubno ka tirsan ururka Daacish ee ku sugnaa magaalada Ceel Cadde ee gobalka Gedo ay ku laayeen qaar ka mid ah xubnaha Daacish.
Labadaan kooxood ee labaduba argaggixiso ah, oo wadaagaan fikradaha xagjirnimada sababta keliya ay u dagaallamayaan ayaa ah iyadoo ay ku heshiini la’ yihiin hantida xaraanta ah ee ay ka fara maroojistaan ummadda Soomaaliyeed ee ay ugu yeeraan canshuurta. Waxaa hubaal ah in midba kan kale uusan u oggoleyn inuu ka faa’iido “canshuurta” sida xag-darrada ah looga uruuriyo dadka Soomaaliyeed iyo in dagaalkooda uu ku saleysan yahay arrintaas iyada ah.